Fenicha Makambani Zviri kutengeswa muUnited States
Fenicha zvinoreva zvinhu zvinokwenudzwa kunoitirwa kutsigira zviitiko zvevanhu zvakasiyana-siyana sekugara (semuenzaniso, zvigaro, zvigaro, uye sofa), kudya (matafura), uye kurara (semuenzaniso, mibhedha). Ificha inoshandiswazve kubata zvinhu pakukwirira kwebasa nyore (seyakaganhurirwa pamusoro pevhu, sematafura nematafura), kana kuchengetedza zvinhu (semuenzaniso, makabati uye masherufu). Ificha inogona kuve yechigadzirwa chekugadzira uye inoonekwa seyenzira yekushongedza. Kunze kwekushanda kwefenicha, inogona kushandira chiratidzo kana chechinamato. Inogona kugadzirwa kubva mumidziyo yakawanda, kusanganisira simbi, plastiki, uye huni. Ificha inogona kugadzirwa uchishandisa akasiyana-siyana majoini ekudyidzana ayo anowanzoratidza tsika yemuno.